ओहो ! सात बर्षको भाले - Everest Daily News
(✒-मिलन के राउत)
रैथाने अर्थात लोकल कुखुराको आयु कति वर्षको हुन्छ ? ठ्याक्कै यति बर्ष बाँच्छ होइन, ‘कहिले छिपिन्छ र बेच्ने वा काटि खाने’ भन्नेमै धेरैको ध्याउन्न हुने गरेको पाइन्छ । तर, तिलमाया मगर फरक छिन् ।
उनले ‘कहिलेसम्म बाँच्दो रहेछ’ भनेर साचि राखेको कुखुराको चल्लो यो बेला सात बर्षको भयो । छिप्पिनुसम्म छिप्पिएको छ, भाले । चरि हिँड्न सक्दैन, चारो दिंदा तिलमायाकै समिपमा लपेटिन्छ । ‘धेरैले किन्न खोजे बेचिन’ उनले भनिन्–जहिलेसम्म बाँच्छ, चारो खुवाएर स्यहार गरिरहन्छु ।
पूर्वको पर्यटकीय स्थल भेडेटारमा होटल व्यवसाय गर्ने तिलमाया उक्त भालेलाई दुई वर्षको हुँदादेखि पालेको बताउछिन् । भेडेटारस्थित राजारानी मार्गको प्रस्थान बिन्दुमै रहेको तिलमाया होटलकी संचालिका उनले उक्त भाले परिवारको सदस्यकै रुपमा रहेको पनि बताइन् । भनिन्–‘यो भाले लक्षिनको पनि छ, पालेदेखि संकटको सामना गर्नु परेको छैन ।’
उनका अनुसार कानेपोखरीको दलेलीबाट आफन्तले पठाइदिएको भाले अहिले सात वर्ष पुगेको हो । भालेलाई हालसम्म कुनै रोग व्याधि नलागेको र औषधोपचार गर्नु परेकोपनि छैन । ‘०७२ सालमै ल्याउदा नै करिब दुई वर्षको थियो, हिसाब गर्दा सात वर्ष त पुग्यो नै !’–उनले भनिन् । होटलमा आउनेले फोटो खिच्ने, मोलतोल गर्ने गरेपनि भाले बिक्री गर्ने कुरा कल्पनापनि नगरेको तिलमायाले सुनाइन् ।
एक वर्ष अघिसम्म ७ केजी तौलको भाले धेरै पाको भएको सुनाउदै हाल ४ किलोमा झरेको तिलमायाको कथन छ ।
भेडेटारकै सौभाग्य होटलका संचालक दीपक मगरले आफुले चार वर्षसम्मको देखेपनि सात वर्ष उमेरको कुखुराचाहि पहिलो पटक देखेको बताए । कतिपय मान्छेले ‘गुरु भाले’का रुपमा लामो समयसम्म पाल्ने गरेपनि यति लामो अवधिसम्म भालेको आयु रहनु र पालिनु नै अनौठो भएको मगरको भनाइ छ ।
रैथाने प्रजातिका कुखुराको आयु सामान्यतयाः तीनदेखि दस वर्षसम्म रहने अध्ययनहरुले देखाएको छ । कुखुराको आयुमा वातावरण, रहनसहन,खानपिन, रोगव्याधि, अनुवांशिक गुणलगायतले प्रभाव पार्छ ।
अध्ययन अनुसार अष्टेलियामा ‘मटिल्डा’ नाम गरेको एउटा कुखुरा १६ वर्षसम्म बाँचेको थियो । सन् १९९० मा कोरलिएको चल्लो ११ फेब्रअुरी २००६ सम्म बाँचेको थियो संसारमा सबैभन्दा बढी समय बाँच्ने कुखुराको रुपमा मल्टिडाको आयु गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ ।
इन्स्पेक्टर डम्वर बैशाख महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित